लिङ्कहरू – Mission
28 February 2021 | आइतवार, फाल्गुन १६, २०७७
Aug252020 by मिसनटुडे संवाददाताNo Comments
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, भदौ ९, २०७७ |
भयो के भने, श्रीमानले श्रीमतीलाई कुनै सानो विवादमा दुईपटक थप्पड लगाई दिएछ । जवाफमा श्रीमतीले आफ्नो चप्पल श्रीमान तिर फ्याँकिन । चप्पलको किनाराले श्रीमानको टाउको छुँदै गयो । कुरा यत्तिकैमा सिद्ध्याउन सकिन्थ्यो, तर पतिले यसलाई आफ्नो अपमान हो भन्ठाने, आफन्तहरूले यो कुरालाई अझ जटिल बनाई दिए । जटिल मात्र कहाँ हो र, गम्भीर ‘। आफन्तहरूले भन्न थाले कि पतिलाई चप्पललेले हिर्काउने महिला न वफादार हुन्छ
Aug202020 by मिसनटुडे संवाददाताNo Comments
नारीलाई भुतु,क्कै पार्ने पुरुषमा हुनुपर्ने ११ गुणहरु
प्रकाशित मितिः बिहिबार, भदौ ४, २०७७ |
नारी र पुरुष भिन्न भएर पनि एकअर्काका परिपूरक हुन् । एकको अस्तित्वबिना अर्को सम्भव छँदै छैन । महिलाहरुले पुरुषका कस्ता गुणलाई मन पराउँछन् भन्ने विषयमा धेरैजसो पुरुषहरुले ध्यान दिने गरेका हुन्छन् । पुरुषहरु महिलाको नजरमा पर्न र मन जित्नका लागि हरेक खालका प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । यही विषयलाई ध्यान दिएर वैज्ञानिकको टोलिले महिलाहरुले पुरुषमा चाहने गुणका बारेमा अनुसन्धान गरेका छन् । उक्त अनुसन्ध
Aug122020 by मिसनटुडे संवाददाताNo Comments
युवा दिवस आयो तर युवाका दिन कहिल्यै आएन
प्रकाशित मितिः बुधबार, साउन २८, २०७७ |
क्षितिज पौडेल युवा दिवस आयो तर युवाका दिन कहिल्यै आएन र अझै पनि आएको छैन । युवा दिवस बिगतका दिनमा झै यस बर्ष पनि मनाउने खासै तयारी भएको पाइदैन । वर्तमान समेत हामि युवा दिवस मनाउदै आएका छौं । हाल कोरोना भाइरस कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका कारण सरकारले गरेको लकडाउनको पालनाका क्रममा यसपालि युवा दिवसको चर्चा त्यती सुन्न पाइएको छैन । देशको जानसांख्यिक तथा श्रम शक्तिको दृष्टिले सबै भन्दा बढी र सबल
Jun152020 by मिसनटुडे संवाददाताNo Comments
सुबिसुको क्लियर टिभीमा अनलाइन कक्षा सुरु
प्रकाशित मितिः सोमवार, असार १, २०७७ |
कोहलपुर : नेपालको एक अग्रणी केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेट प्रा.लि.ले क्लिएर टिभिमा अनलाइनमा कक्षा सुरु गरेको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिको मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले समेत विभिन्न माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था मिलाएसँगै सुबिसुले समेत अनलाईन कक्षको सुरुवात गरेको हो । यस बिषम परिस्थितिमा बिद्यार्थी बर्गहरुको पठन पाठनमा अबरोध नहोस भनिक्लियर टिभी सेवामा
Feb242020 by मिसनटुडे संवाददाताNo Comments
किन भाइरल भयो कियराको तस्वीर ?
प्रकाशित मितिः सोमवार, फाल्गुन १२, २०७६ |
नायिका कियरा आडवाणीको बलिउड क्रेज ह्वात्तै बढेको छ । चलचित्र ‘कविर सिंह र गुड न्यूज’ सफल भएपछि कियराको बलिउड डिमाण्ड बढेको हो । विशेषगरि, सुरुवाती दिनमा बलिउडमा साधारण शैलीमा हिड्ने कियरा अहिले बोल्ड अवतारमा प्रस्तुत हुन थालेकी छिन् । हालैमात्र, उनले फोटोग्राफर डब्बु रतानीको क्यालेन्डरमा बोल्ड फोटोसुट गराएकी छिन् । कियराले गराएको टपलेस फोटो अहिले भाइरल भैरहेको छ । विशेषगरि, चलचित्र ‘क
Oct152019 by मिसनटुडे संवाददाताNo Comments
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, अशोज २८, २०७६ |
काठमाण्डौं । नायिका बेनिशा हमाल अहिले निर्माता रौनिक विक्रम कँडेलको प्रेममा छिन् । रौनकसँगको प्रेमका कारण उनलाई फेरि एकपटक मिडियामा चर्चा त मिलिरहेको छ । चलचित्रको पर्दामा केही समयदेखि नदेखिएकी बेनिशाले नयाँ चलचित्र साइन त गरेकी छिन् तर त्यसको छायांकन सुरु हुन सकेको छैन । बेनिशा आफैले पनि कम चलचित्र गर्ने बताउँछिन् । उनै, बेनिशाको सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राममा अहिले बोल्ड तस्वीर पोष्ट हुन था
Oct142019 by मिसनटुडे संवाददाताNo Comments
प्रकाशित मितिः सोमवार, अशोज २७, २०७६ |
बलिउडमा यस्ता जोडी पनि छन् जसले आफ्नै को–स्टारमा साँचो प्रेम भेटे । यसका साथै, यस्ता जोडीको पनि कमी छैन जसले साँचो प्रेम पाउँदासमेत सुखद वैवाहिक जीवन बिताउन सकेनन् र अन्ततः अलग्गिए । यीमध्ये कतिले दोस्रोपटक विवाह गरे भने कति आज पनि सिंगल छन् । आज हामी बलिउडका यस्तै केही हिरोइनबारे जानकारी दिँदै छौं जसले श्रीमानसँग अलग्गिएपछि पनि दोस्रोपटक विवाह गरेका छैनन् । मनिषा कोइरालाः नेपाली मूलकी बलिउड
७७ लागे अमिताभः मलाई किन जन्माएको भनेर बाबुलाई सोध्दा पाएका थिए यस्तो जवाफ
बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनले आज शुक्रबार आफ्नो ७७ औं जन्मदिन मनाउँदैछन्। उनी सन् १९४२ मा तात्कालिन ब्रिटिस इण्डियाको अलाहाबाद(प्रयागराज)मा जन्मिएका थिए। करियरको सुरूवाती दिनमा लगातार फ्लप सिनेमा दिएर बलिउड छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका अमिताभले अभिनयका लागि चार वटा राष्ट्रिय पुरस्कार जितेका छन्। ३० वर्षको उमेरसम्म पुग्दा उनले १२ फ्लप सिनेमा दिएका थिए। यसक्रममा उनी अभिनित 'बम्बे टु गोवा' र 'आनन्द'
‘छ माया छपक्कै’ले दुई दिनमै कमायो ३ करोड
शुक्रबार रिलिज भएको फिल्म 'छ माया छपक्कै'ले दुई दिनमै तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढी कमाएर रेकर्ड बनाएको छ। आमा सरस्वती मुभिज र रोहित अधिकारी फिल्म्सको प्रस्तुति तथा दीपेन्द्र लामाको निर्देशनमा बनेको फिल्म देशभरमा तीन सयभन्दा बढी शो चलिरहेको छ। निर्देशक लामाका अनुसार शुक्रबार फिल्मले एक करोड ५५ लाख रूपैयाँ कमाएको थियो भने दोस्रो दिन शनिबार योभन्दा दस लाख बढी कमाएको हो। दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौ
लत्ता–कपडा किनमेलमा ठगिने डर छ ? यसरी गर्नुस् ‘सपिङ’
यतिबेला चाडपर्व लक्षित बजार तात्तिएको छ । सपिङ मलदेखि सडकपेटीका पसलसम्ममा उपभोक्ताहरुको बाक्लो भीड देख्न सकिन्छ । किनमेल आफैंमा सहज हुँदैन । पसलको भीडभाड, व्यापारीको चर्को बार्गेनिङ र सामान छान्न सकसले गर्दा उपभोक्ता हैरान बन्छन् । नेपालमा प्रायः लत्ता कपडा तथा जुत्ता पसलहरुमा डरलाग्दो ठगी हुने गरेको छ । ब्यापारीले दोब्बर–तेब्बरसम्म मूल्य बढाएर भन्ने हुनाले बार्गेनिङ गर्न नजाने सहजै फस्न सकिन्छ ।
Sep292019 by मिसनटुडे संवाददाताNo Comments
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको नक्कली फेसबुकबाट निर्देशन
प्रकाशित मितिः आइतवार, अशोज १२, २०७६ |
सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नक्कली फेसबुक एकाउन्टबाट गलत क्रियाकलाप भएको पाइएको छ । मुख्यमन्त्रीको नाममा खोलिएको नक्कली फेसबुक एकाउन्टबाट केही व्यक्ति र सरकारी निकायका प्रमुखलाई म्यासेज गएपछि गलत क्रियाकलाप भएको थाहा भएको हो । नक्कली फेसबुक चलाएका व्यक्तिले उक्त एकाण्टबाट केही व्यक्तिहरु र सरकारी निकायका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिने र विभिन्न आयोजना दिन सिफारि
Sep152019 by मिसनटुडे संवाददाताNo Comments
विद्यालय शिक्षामा बाल विवाह र बालबेच बिखन विषयले पाएको स्थान र हाम्रो भूमिका
प्रकाशित मितिः आइतवार, भदौ २९, २०७६ |
अनन्तकुमर पौड्याल, कोहलपुर नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख । बाल विवाह र बाल बेचविखन दुवै सामाजिक समस्याहरु हुन् । यसबाट दाम्पत्य जीवनमा समस्याहरु आउँछन् । पारिवारिक तनाव, बेमेल र झगडा हुन्छ । सामाजिक विकृतिहरु देखापर्छन् । अशान्ति बढछ । अनमेल विवाहह र बहुविवाह जस्ता सामाजिक समस्याहरु बढने सम्भावना रहन्छ । यो कुरा समुदायमा कसरी पुरयाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनभने बाल विवाह र बाल बे